Ukuphinda-phinda itheyibhile (amaxesha): izibonelelo zokufunda ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukufunda kuhlala yeyona ndlela ilungileyo. A izibalo Olunye uqeqesho olukhapha abafundi ngaphaya kweebhentshi zokufunda, njengoko kunjalo kuyo yonke into: ishishini, imali, ukuthenga kunye neminye imisebenzi emincinci yemihla ngemihla. Izibonelelo zokufunda ukuphindaphinda iitafile, umzekelo, zinkulu.
UNjingalwazi Rômulo Mussel, uthweswe isidanga seMathematics kwi-UERJ, unesidanga seMathematics kwi-IMPA kunye nonjingalwazi kuMasipala waseRio de Janeiro, ugcina iblogi ekhethekileyo. Ugqibe kwelokuba enze indawo ebonakalayo yokunceda abafundi "batshintshe izifundo zabo ngokuqonda iimeko ezilula, kodwa ezifuna amandla amakhulu okuqiqa."
Umfundi kunye nomphandi baveza ukuba itheyibhile yokuphindaphinda isisiseko kwaye ukuqonda kubalulekile ekuhlobiseni. «Ndithi zombini zibalulekile, ukuqonda kubalulekile, kodwa Ukuhombisa kungaphezulu kokufunekayo«Ithi imbaza.
1 Izibonelelo zokwazi itheyibhile yokuphindaphinda
1.1 Kulula ukufunda itafile yokuphindaphinda.
1.2 Phucula ukuqiqa.
1.4 Nika izifundo ezintle
2 Jonga itheyibhile yokuphindaphinda
Izibonelelo zokwazi itheyibhile yokuphindaphinda
Utitshala ongumfundi uyajula xa esitsho Ukwazi amaxesha etafile kubalulekile ukuba wazi indlela yokwahlulahlula"Ngenxa yamava endinawo kwigumbi lokufundela, abafundi baqala ukuba neengxaki xa kuvela amaxesha adumileyo kunye nemithetho esayilwayo, kwaye le ngxaki iba mandundu ngakumbi kuba abafundi abayazi itafile yokuphindaphinda nokuba abayazi nini. , nayiphina iakhawunti elula iba nzima kangangokuba umfundi agqibe ukuyeka ”.
Ibhlog yentshaba ikholelwa ukuba. Idayari ebonakalayo izisa ubungqina besazi semathematika uNuno Crato, 61, owaphumelela i-2008 European Science Prize kunye noMphathiswa Wezemfundo ePortugal, apho athi ukuhombisa iitafile zokuphindaphinda kunceda abafundi ukuba bakhawuleze.
NgokwaseYurophu, itheyibhile yokuphindaphinda iyakhawulezisa ukuqiqa komfundi, efunda iimpendulo ezichanekileyo, ngaphandle kokuchitha ixesha uzama ukwenza iiakhawunti ezivulekileyo ngakumbi. Esi sisicwangciso esibalulekileyo kwabo banexesha elincinci lokuthatha iimviwo, ezinje ngeEnem okanye olunye uvavanyo.
Unoko engqondweni, sidwelise izibonelelo zokufunda ukuphindaphinda itafile okanye amaxesha, njengoko ukhetha ukuyibiza.
Kulula ukufunda itafile yokuphindaphinda.
Ukuba uyakwazi ukuphinda-phinda, ngokuqinisekileyo uya kwazi ukwahlulahlula. Ke ngoko, abafundi baqala ngokufunda inani lamaxesha eliphindaphindwayo kwaye baqonde indlela yokuhambisa amatyala.
Ubunzima obuncinci bobomi bemihla ngemihla buya kunyamalala kufundo lweetafile zokuphindaphinda. Kungenxa yokuba ukwazi ukuphindaphinda, ukongeza, ukwahlula kunye nokunciphisa Unceda ekuqiqiseni okuvakalayo, ekhoyo kwisikolo sethu sonke, kwizifundo, kubungcali nakubomi babucala.
Ukujongana namanani, iiakhawunti kunye neziphumo kuphucula uxinzelelo luphela. Xa ukhuthaza ingqondo yakho ukuba icinge ngombuzo wokuphindaphinda umzimba wakho kunye namandla jika ufumane impendulo.
Nika izifundo ezintle
Ukufundisisa itafile yokuphindaphinda kunika izifundo ezigqwesileyo zabafundi. Ukuphindaphinda kunokuba yinto elungileyo okanye embi, kuxhomekeke kwinto ekuthethwa ngayo. Ke ngoko, unokulwenza oluninzi kwezi ndlela zokuqiqa, ngakumbi ukujongana nazo iingxaki zemali kunye nomsebenzi kwikamva.
Jonga itheyibhile yokuphindaphinda